Jubbaland oo tababar usoo xirtay ciidan Booliis ah
Dhinacyada Liibiya oo iskaga baxay wadahadalada nabadda ee Geneva
By Xaqiiqa Times / in Wararka Maanta / on Thursday, 24 Oct 2019 07:58 AM / 0 Comment / 70 views
Wasiir ku xigeenka wasaaradda Tamarta iyo kheyraadka Biyaha ee Xukuumadda Soomaaliya Cismaan Libaax Ibrahim iyo wafdi u hoggaaminayo ayaa Magaalada Qaahira ee Dalka Masar kaga qeyb galaya shirka Ururka Islaamka.
Wasiir ku xigeenka ayaa kulamo hareer socda shirka la qaatay wasiiradda dhiggiisa ah ee ka qeyb galay shirka, isagoo kala hadlay sidii laysaga kaashan lahaa dhibaatooyinka xagga Biyaha ah ee ka taagan qaar ka mid ah Dunida Islaamka.
Sidoo kale Wasiirka ayaa lagu wadaa in uu ka qeyb galo shirka Todobaadka Biyaha Masar oo Khamiista Maanta ah lagu soo gebagabayn doono Magaalada Qaahira, iyadoo la wado in uu halkaasi ka jeediyo Khudbad ku aaddan habka uu Dalkeennu ugu faa’iideysan karo Kheyraadka Biyaha.
Wasiiradda Biyaha ee Dowladaha ku midoobay Ururka iskaashiga Islaamka ee OIC ayaa Sanadkiiba ka arrinsada Biyo yarida ka jirta Waddamada ka tirsan Ururkan.
Kulamada noocan oo kale ah ayaa waxa laga soo saaraa war murtiyeed ku saaabsan in si guud loo taageero Dalalka ay haysato Biyo yarida iyo sidii loo horumarin lahaa ka faa’ideysiga kheyraadka Biyaha.
London – Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Nuur Xassan Xusseen (Nuur Cadde) ayaa ku...
Muqdisho – Shir qaatay ku dhawaad 10 sacaadood oo mareegta internet-ka ee loo yaqaano (Video-Conference)...
Waxaa maanta magaalada Kismaayo tababar loogu soo gabagabeeyay dufcadii afraad ee kamid noqonaysa ciidanka...
Wakiillo ka kala socday dhinacyada ku hardamaya Libya ayaa isaga baxay wadahadalada nabadda ee qaramada...
London – Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Nuur Xassan Xusseen... Read more →
Muqdisho – Shir qaatay ku dhawaad 10 sacaadood oo mareegta... Read more →
March 18, 2020 7:57 pm
Waxaa maanta magaalada Kismaayo tababar loogu soo gabagabeeyay dufcadii afraad... Read more →
February 24, 2020 10:11 pm
Wakiillo ka kala socday dhinacyada ku hardamaya Libya ayaa isaga... Read more →